Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal आज संसद् बैठक बस्दै, अघि बढ्ला त एमसीसीमाथि छलफल ? - Pnpkhabar.com
आज संसद् बैठक बस्दै, अघि बढ्ला त एमसीसीमाथि छलफल ?
काठमाडौं, १५ फागुन: बारम्बार स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधि सभा बैठक आज (आइतबार) बस्दैछ । आज दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा अमेििरकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी छलफल हुने छ ।
आजको प्रतिनिधि सभाका लागि दुईवटा सम्भावित कार्यसूची रहेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउावले ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सम्भावित कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौतामाथि छलफल हुने उल्लेख छ । उक्त प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नेछन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रहमा बिहीबारका लागि तोकिएको बैठक शुक्रबार दिउँसो एक बजेका लागि सारिएको थियो । शुक्रबारको बैठकअघि एमसीसीको विषयमा सहमति नभएपछि बैठक आइतबारका लागि सारिएको हो ।
गत आइतबारको बैठकमा सरकारले एमसीसी सम्झौता टेबल गरेको थियो । एमसिसी सम्झौताअनुसार यही फागुन १६ गतेसम्म उक्त प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ ।
ठूला राजनीतिक दलमध्ये कांग्रेस स्पष्ट रुपमा खुलेर एमसिसीका पक्षमा देखिएको छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन कांग्रेसले दौडधुप गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म भेटघाटमा सक्रिय भएका छन् ।